Sunny Leone - Bollywood actress .... sexiest actress in bollywood
Topic: Sunny Leone - Bollywood actress .... sexiest actress in bollywood
Author Topic: Sunny Leone - Bollywood actress .... sexiest actress in bollywood (Read 19979 times)
« on: November 15, 2008, 06:44:43 AM »
She is an Indian p0rnstar and she is supposed to pose naked all the time. But here she is not naked but instead clad in typical indian cloths.
« Last Edit: May 17, 2015, 07:58:06 AM by tundikhel »
Re: Sunny leone rare photos - in Indian clothes
« Reply #1 on: November 15, 2008, 06:46:37 AM »
Re: Sunny leone rare photos - in salwar kamiz
« Reply #2 on: July 17, 2009, 04:04:16 AM »
Her name was Karen Malhotra previously.
Leone does her best to maintainalink to Sikh traditions, even if more in theory than in practice.
« Reply #3 on: July 17, 2009, 04:10:46 AM »
« Reply #4 on: December 07, 2010, 05:00:16 PM »
She wares or nit wares she is queen of beauty, I love her
« Reply #5 on: December 07, 2010, 10:06:40 PM »
I have posted her naked photos in chadda section
« Reply #6 on: April 01, 2015, 04:28:23 AM »
सन्नी लियोनको सम्भोग कहानी
भारतीय मूलकी क्यानाडाई अभिनेत्री सनी लियोन पोर्न स्टार हुन् । उनका नीला फिल्म प्रशस्तै छन् । नीला फिल्म खेल्दा खेल्दै भारतीय चर्चित टेलिभिजन कार्यक्रम ‘बिगबोस’ हुँदै बलीउडमा छिरेकी सनीले एडल्ट फिल्म इन्डष्ट्रीबाट बिदा भएको बताएकी छन् । उनले आफ्नो व्यक्तिगत जीबनबारे पनि धेरै कुराको खुलासा गरेकी छन । प्रस्तुत छ भारतीय टेलिभिजन आजतकलाई सनीले दिएको अन्तरवार्ता :
एडल्ट स्टारबाट बलीउड हीरोइन बन्नु भयो, कस्तो भयो यो यात्रा ?
हेर्नुस्, तपाईंले यो सम्झनुपर्छ की यो एक व्यापार थियो । एक व्यवसायीक काम जस्तै हो । यो यस्तो कम्पनि हो, जसमा अरबौं डलर खर्च हुन्छ तर कहिल्यै घाटा सहनु पर्दैन । त्यसैले मेरो दिमागमा एडल्ट फिल्ममा काम गर्नेबेला धेरै पैसा बिजनेस गर्ने सोंच आयो, ताकि जुन प्रोड्युसरसँग मेरो कामको सम्झौता भएको थियो, उसको सपना नटुटोस् । मैले पहिलोपटक पोर्न फिल्ममा काम गर्दा मेरो पार्टनर मेरो आफ्नै ब्यायफ्रेन्ड थियो । त्यसपछि मैले निकै थोरै मान्छेसँग यसखालको फिल्ममा काम गरें । पहिलो फिल्मको पार्टनर जुन मेरो ब्यायफ्रेन्ड थियो, अहिले त्यही मेरो पति हो ।
एक पत्नी र बहिनीको रुपमा सनी लियोन कस्ती छ ?
Re: Sunny Leone - Bollywood actress .... sexiest actress in bollywood
« Reply #7 on: May 17, 2015, 07:58:48 AM »
हिन्दु जनजागृति समाज (एजचेएस)ले नायिका सन्नी लियोनीलाई भारतवाट देश निकाला गर्नुपर्ने र भविष्यमा भारत प्रवेश रोक लगाउनुपर्ने माग गरेको छ ।
वेभसाईटमा अश्लिलता फैलाएको र महिलाको गरिमाको अपमान गरेको अभियोगमा उनलाई देश निकाला गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । एचजेएसका प्रवत्ता उदय धुरीले ठाणे डोबीवलीस्थित रामनगर प्रहरी प्रमुख प्रमुख सुनील शिवडकरसंग उजुरी दर्तार् गराएका छन् ।
एजचेएसका स्थानिय प्रतिनिधी अञ्जली पालनले उजुरी दर्ता गराएकी थिईन् । यसको अतिरिक्त यो संस्थाले पछिल्लो एकहप्ता यता यस्तै किसिमका दर्जन बढी उजुरी दर्ता गराएको छ । महाराष्ट्र र गोवाको विभिन्न जिल्लामा उजुरी दर्ता गरिएको धुरीको भनाई रहेको छ ।
सन्नी लियोनीको अश्लिल तस्विरको कारण भारतीय युवा बिग्रिएको र महिलाहरुको अपमान भएको धुरीको भनाई छ । ‘वेभसाईट त वालवालिकाले पनि हेर्न सक्छन् त्यसकारण यस्ता सामग्री बन्द गरिनुपर्छ ।’ धुरीले भने ।
पछिल्लो समय गुगल सर्च इन्जिनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भन्दा सन्नी लियोनीको बढी खोजी भएकोमा धुरीले चीन्ता ब्यक्त गरे ।
« Reply #8 on: June 11, 2015, 11:41:40 PM »
अब सन्नी लियोन को बारेमा जानकारी:
सन्नीको जन्म १३ मे १९८१ मा क्यानडाको सार्निया शहरमा भएको थियो।
उनका तिब्बतियन बाबु र हिमाञ्चल प्रदेशकी आमा सन्नी जन्मनु भन्दा अघाडी नै क्यानडा स्थाई बसोबास गर्न गएका थिए।
बाल्यकालमा सन्नी राम्रो बास्केटकल खेल्थिन ।
सन्नीले ११ वर्षको हुँदा पहिलो चुम्बन गरेकी थिइन् भने १६ वर्षमै उनले आफ्नो कुमारीत्व गुमाएकी थिइन्।
१६ बर्ष देखि नै उनि सेक्सप्रति उत्सुक हुँदै गएकी थिइन् भने उनले १९ बर्षको उमेरमा उनले ब्लु फिल्म खेल्न थालेकी थिइन्।